EX - ABSDF: သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၆-၆)
သမ္မတ လစဉ်မိန့်ခွန်း ပြောကြားပြီးသည့် နောက်ပိုင်း ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး လှုပ်ရှားမှုအပေါ် နှောင့်ယှက် ဟန့်တားမှုများစွာ ကြုံတွေ့နေရ
မတရားအသင်း ဆက်သွယ်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ကျိုင်းတုံတာဝန်ခံ စိုင်းအိုက်ဂျဲန်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
KNU တပ်မဟာ(၇)က “ဒို့မိတ်ဆွေ” အမည်ဖြင့် ယာဉ်လိုင်းပြေးဆွဲရန် စီစဉ်
ကြံ့ခိုင်ရေးဝါးရင်းတုတ်တပ်ဖွဲ့ပါဝင်မိ၍ ဂျလေဘီဟု အစိုးရသတင်းစာမှ အရေးခံခဲ့ရ – တာမွေအောင်ကို
လွှတ်တော်တွင်း တပ်မတော်သား ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း မထွက်ရရေး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမှ လစာ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ပြန်လည်ပေးလှူခြင်း ယတြာဖြစ်နိုင်ကြောင်း သုံးသပ်သူများရှိ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို ခေါင်းဆောင်မျိုး ဒီချုပ်တွင် ပေါ်လာနိုင်ဟုဆို
ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာနှင့် ဆက်စပ်သူ အချို့ မြန်မာသံတော်ဆင့်နှင့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယကအား ခြိမ်းခြောက်မှု ဆက်သွယ်ပြောဆို
သမ္မတဆက်လုပ်ရန် KNU တိုက်တွန်းသော်လည်း သမ္မတ ဆက်လုပ်ရေး၊ မလုပ်ရေး ပါတီဆုံးဖြတ်ချက် နာခံရမည်
၂၀၁၄ ခုနှစ် အတွင်း မန္တလေးမြို့ နေ့အပူချိန် ဒုတိယအကြိမ် အမြင့်ဆုံးသို့ ရောက်ရှိနေ
ဦးသိန်းစိန် ဒုတိယအကြိမ် သမ္မတ သက်တမ်း ထမ်းဆောင်ရန် စဉ်းစားမည်
ပုသိမ်နှင့် ယိုကိုဟားမားမြို့တို့ကို ညီအစ်မမြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ်
လားရှိုးတွင် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမည့်အခြေအနေ ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့
အိုရီဒူး ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှု ပေါ်
တအာင်းနဲ့တိုက်ပွဲ အစိုးရဘက်က အကျအဆုံးရှိ
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ကို ထိုင်း စစ်အာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီးခဲ့ ပါတယ်။ ရှပ်နီ ခေါင်းဆောင် စုမ်ဘတ် ဘွန်းငမ်အနုမ်း Sombat Boonngamanong ကို အင်တာနက်ပေါ်မှာ သူရေးတင်တဲ့ သတင်းတွေနေ ထိုင်း စစ်အာဏာပိုင်တွေက ခြေရာခံ ဖမ်းမိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ သတင်းတွေ တင်နေတဲ့ နေအိမ်ကို လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့တွေက ဝင်ရောက် ရှာဖွေတဲ့အချိန်မှာ စုမ်ဘတ်ငမ်အနုမ်း ကို ဖမ်းမိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက
Posted: 06 Jun 2014 07:18 AM PDT
ပြင်သစ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း Sword Beach ကမ်းခြေမှာ မဟာမိတ်တပ်များရဲ့ D Day ကမ်းတက် စစ်ဆင်ရေး အနှစ် ၇၀ မြောက် နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနား ကျင်းပနေပါတယ်။ သဲသောင်ပြင်ပေါ်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ အခမ်းအနားကို တက်ရောက် လာကြသူတွေထဲမှာ နိုင်ငံပေါင်း ၂၀ နီးပါးက ခေါင်းဆောင်တွေ၊ အများစုက ဘီးတပ် ကုလားထိုင်တွေနဲ့ အားအင် ချိနဲ့ နေကြပြီ ဖြစ်တဲ့ စစ်ပြန်ကြီးတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး အဆုံးသတ်ရေး အတွက် အဓိက
ပြည်သူတွေ ပြင်ချင်တာကို ပြင်ချင်တဲ့ဆန္ဒကို မပေါ်စေချင်တဲ့ သဘောရှိတယ်။ တကယ်လို့ သူတို့ပြောသလို ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ၉၂ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ထောက်ခံခဲ့တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဘက်က ခိုင်မာတယ်ဆိုရင် ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပေါ့ … ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၄ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က မေလ ၃၁ ရက်နေ့၌ ပြောကြားသည့် ရေဒီယိုမိန့်ခွန်းတွင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်း၏ သဘောထားများကိုြေ
စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ ဆက်သွယ်လို့ ဆိုတာမျိုး ဘာတစ်ခွန်းမှ မမေးဘူး 16မတရားသင်း ဆက်သွယ်မှုဖြင့် မေလ ၄ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(SNLD) ကျိုင်းတုံ တာဝန်ခံ စိုင်းအိုက်ဂျဲန်အား ကျိုင်းတုံအခြေစိုက် ခမရ ၂၄၅ တပ်ရင်းမှ စစ်သားများက လာရောက် ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ယင်းသို့ ဖမ်းဆီးခံရစဉ် အချိန်အတွင်း ရိုက်နှက် ခံခဲ့ရသည့်အပြင် မတရားသင်း
Posted: 06 Jun 2014 05:51 AM PDT
ဇွန် ၆ ရက်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်။ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU) တပ်မဟာ (၇) တည်ထောင်ထားသော မိုးကိုစံကုမ္ပဏီက “ဒို့မိတ်ဆွေ” အမည်ဖြင့် အဝေးပြေးယာဉ်လိုင်းတစ်ခုကို အာရှလမ်းမကြီးဖောက်လုပ်ပြီးစီးအမှီ ပြေးဆွဲနိုင်ရန် စီစဉ်လျှက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။ ယာဉ်လိုင်းပြေးဆွဲနိုင်ရန်အတွက် မေလဆန်းပိုင်းက စတင်ကာ ခရိုင်၊ ပြည်နယ်အဆင့်ဆင့်ရှိ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ၏ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးဌာနများသို့ လျှောက်ထားခဲ့ပြီး
Posted: 06 Jun 2014 05:35 AM PDT
အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ကြာမြင့် လာသည့်တိုင် ထိုအခြင်းအရာတို့ကို ပြန်တွေးလိုက်တိုင်း ဦးဟင်းပန်း ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ်ခွင့်မလွှတ်နိုင်သေး။ မိမိ၏မကျွမ်း ကျင်သောဆေး ပ ညာကြောင့် ကြွေလွင့်ခဲ့ရသည့် ဝိညာဉ်များကို ရည်စူးပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြု အမျှဝေခြင်းတို့ကို အခွင့်သာတိုင်းသူလုပ်ခဲ့သည်။ ”စေတနာကစေတနာပဲ၊ အမှားကအမှား ပဲ ကိုယ်ကယ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ လူတွေ အတွက် ဝမ်းသာရသလို ကိုယ့်အမှား ကြောင့် ဖိတ်စင်ခဲ့ရတာတွေကိုအခုထိေ
Posted: 06 Jun 2014 05:29 AM PDT
ရဲတပ်ကြပ်တစ်ဦးက ဂစ်တာတီး နေသူ လူငယ်တစ်ဦးကိုရိုက်နှက်ခဲ့မှုအား မိသားစုမှ အမှုဖွင့် တိုင်ကြားသော် လည်း ရက်သတ္တပတ် ကြာမြင့်သည်အထိ အမှုဖွင့်အရေးယူပေးခြင်း မရှိ ကြောင်းကာယကံရှင် မိသားစုက ပေါ်ပြူ လာနယူးစ်သို့ ပြောသည်။ ”ကျွန်မတို့ မကျေနပ်လို့ ရွှေပေါက္ကံရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားတယ်။ ရဲစခန်းက အမှု မဖွင့်ပေးသေးဘူး” ဟု အဆိုပါအရိုက်ခံခဲ့ရသည့် လူငယ်၏ အစ်မဖြစ် သူက ပြောသည်။ ရဲတပ်ကြပ်၏ ရိုက်နှက်ခြင်း ခံခဲ့ရသူ
Posted: 06 Jun 2014 05:21 AM PDT
စွမ်းအားရှင်ဆိုတဲ့ ၀ါးရင်းတုတ်တပ်ဖွဲ့ကို ခေါင်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးအလုပ်အမှုဆောင်တွေ အခုတော့ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်မှာ အမတ်မင်းတွေ ဖြစ်နေကြ . . . ခရိုင်အတွင်းရေးမှူး တစ်ဦးက တာမွေကျောက်မြောင်းကြီး ရပ်ကွက်၊ အောင်မင်္ဂလာလမ်းရှိ ဟိန္ဒူ မင်္ဂလာ ခန်းမ တွင် ပြုလုပ်လျက် ရှိသော အမှုဆောင်ဆင့်ပွားသင်တန်း၌ သင်ခန်းစာပို့ချပြီး ဒဏ်ရာရသူ လူနာအား သွားကြည့် မည်၊ ထောက်ပံ့ငွေလည်း ပေးမည်။ ကိုအောင်ကိုရေ
Posted: 06 Jun 2014 05:08 AM PDT
နေပြည်တော်၊ စမတောင်တွင် မေလအတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သော ဘုရားပန္နက်တင်၌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ နေပြည်တော်ရှိ အကြီးအကဲများအပြင် နေပြည်တော်တိုင်းမှူးနှင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ ကိုယ်ရံတော် အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်စိုးရှိန်(ငြိမ်း)လည်း ပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမှာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုများ . . . ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၄ နိုင်ငံတော်တွင် ဆင်းရဲမွဲတေမှုများ လျှော့ချရေးအတွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် အစိုးရ
Posted: 06 Jun 2014 04:40 AM PDT
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လွန်ခဲ့သော မေလဆန်းမှ စတင်၍ သွေးလွန်တုတ်ကွေး ရောဂါများ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ယခုအခါ ယင်းရောဂါဖြင့် စစ်တွေဆေးရုံကြီးတွင် တက်ရောက်ကုသနေရသူ အများအပြားရှိကြောင်း သိရသည်။ ယခု ရက်ပိုင်းအတွင်း စစ်တွေဆေးရုံသို့ သွေးလွန်တုတ်ကွေး လူနာလေးငါးဆယ်နီးပါး တက်ရောက် ကုသ ခဲ့ ရပြီး၊ လူနာအများစုမှာ မင်းပြားမြို့နယ်နှင့် ပေါက်တောမြို့နယ်တို့ကဖြစ်ကြောင်း စစ်တွေဆေးရုံရှိ သွေးလှူရှင် အသင်းမှ ပြောသည်။ေ
Posted: 06 Jun 2014 04:46 AM PDT
ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း မူဆယ်ခရိုင် အနီးမှာ တရုတ်-မြန်မာ ၂ နိုင်ငံ နယ်နိမိတ် ပြန်လည်တိုင်း တာရေး တွေ ပြုလုပ်ပြီးတဲ့ နောက် ဒေသခံတွေ အနေနဲ့ သူတို့ပိုင်မြေတွေ တရုတ်ပိုင်နက် ရောက်သွားမှာကို စိုးရိမ် မကင်း ဖြစ်နေကြပြီး နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးဆီ စာပေးပို့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြန်မာနဲ့ တရုတ်အာဏာပိုင်တွေဟာ ဒီလဆန်းပိုင်းက ရွာသားပိုင်စိုက်ခင်းတွေထဲ နယ်နိမိတ်တိုင်တွေ လာရောက် စိုက်ထူသွားတဲ့အတွက် သူတို့မြေတွေ
Posted: 06 Jun 2014 04:49 AM PDT
ပါတီအတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ကဲ့သို့ စိတ်နေ စိတ်ထားနှင့် တိုင်းပြည် အကျိုး ပြုနိုင်သည့် ခေါင်း ဆောင်များ ပေါ်ပေါက်လာ နိုင်ကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ နာယက ဦးတင်ဦး ကပြောသည်။ နာယက ဦးတင်ဦးက ''ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်လို ထက်ထက်မြက်မြက် နဲ့ ဦးဆောင်သူတွေ ပေါ်ထွက်လာ ဖို့ ရှိတယ်။ လူဆိုတာ အသက် အရွယ်အရ ကြီးရင့်လာမှာ ဆိုတော့ လူငယ်မျိုးဆက် နိုင်ငံရေး သမား တွေပေါ်ပေါက်လာ ဖို့ လက်ကမ်း တွဲခေါ်
Posted: 06 Jun 2014 04:23 AM PDT
အသက်ရှစ်နှစ်အရွယ်တွင် အလွန် အမင်း ကိုယ်ပူတက်ပြီးနောက် ခြေဖဝါးနှစ် ဖက်နှင့် လက်ဖဝါးများတွင် နှင်းဆီဆူးကဲ့သို့ အသားတက်များ ထွက်ပေါ်သည့်ဝေဒနာ ခံ စားနေရသည့် အသက် ၂ဝ အရွယ် မခိုင်ခင် ဦးသည် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်းက တောင်ကြီးမြို့ ထွန်းအထူးကုဆေးခန်းတွင် အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာခင်အောင် ထွန်းနှင့် တွေ့ဆုံကုသမှုခံယူခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ဘယ်ဘက်ခြေဖဝါးမှ ဆူးတက်များအား ခွဲ စိတ်ကုသခဲ့ပြီးနောက် ယခုအခါ
Posted: 06 Jun 2014 04:18 AM PDT
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၄ အစိုးရသမ္မတရုံးမှ ဖွင့်လှစ်ထားသော ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ (MPC) နှင့် ဆက်စပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်အချို့မှ ယခင်နှစ်နှင့် ယခုနှစ်ဆက်တိုက် မြန်မာသံတော်ဆင့်အပြင် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယကကိုပါ ခြိမ်းခြောက်မှု မြောက်သော ဆက်သွယ် ပြောကြားမှုများ ရှိလာခဲ့သည်။ ယခင်နှစ် (၂၀၁၃) အတွင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် တစ်ဆူပေး၍ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးကာ အစိုးရ သတင်းစာများတွင် ဒုတိယ
Posted: 06 Jun 2014 04:15 AM PDT
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၅ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်အား စတင် လမ်းဖောက်ခဲ့သူ ဖြစ်သဖြင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် (ကြံ့ခိုင်ရေးဥက္ကဋ္ဌ)အား သမ္မတ သက်တမ်း ထပ်ယူရန်အတွက် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး(KNU) ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့မှ တိုက်တွန်း ခဲ့ သော်လည်း ပါတီအတွင်းသာ ဆုံးဖြတ်ရမည့် ကိစ္စဖြစ်ကြောင်း အာဏာရ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်များက မြန်မာသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။ KNU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ ဇွန်လ ၅
Posted: 06 Jun 2014 04:01 AM PDT
မန္တလေးမြို့တွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ် လေးလအတွင်းနေ့ အပူချိန် ဒုတိယအကြိမ် အမြင့်ဆုံးသို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မိုးလေ၀သ ဦးစီးဌာနမှ သတင်း ရရှိသည်။ မန္တလေးမြို့တွင် ယခုဇွန်လ (၄) ရက်နေ့က အမြင့်ဆုံး အပူချိန် (၄၀ ဒဿမ ၇) ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်၊ (၁၀၅ ဒဿမ ၃) ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် အထိရှိ နေကြောင်း အဆိုပါဌာန ၏ ထုတ်ပြန်ချက် အရ သိရသည်။ မန္တလေးမြို့ နေ့အပူချိန် မြင့်မား မှုကြောင့် အပူရှပ် ဝေဒနာရှင်များ
Posted: 06 Jun 2014 03:59 AM PDT
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ဒုတိယအကြိမ် သမ္မတ သက်တမ်းကို ဆက်လက် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် စဉ်းစားမည် ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ ပြောခွင့်ရ ပုဂ်္ဂိုလ် ဦးရဲထွဋ် က The Messenger သတင်းစာ သို့ ပြောသည်။ ဆက်ပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း မထမ်းဆောင်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကတော့၊ ဆန္ဒအရ ပြောရင်သူရဲ့ ကျန်းမာရေးအရ အသက် အရွယ်အရ ဆက်လုပ်ဖို့ ဆန္ဒမရှိဘူးလို့ အရင်တုန်းက ပြောခဲ့တာပေါ့။ ဘာပဲ ပြောပြော
Posted: 06 Jun 2014 03:57 AM PDT
ဂျပန်နိုင်ငံ ယိုကိုဟားမားမြို့နှင့် ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ပုသိမ်မြို့တို့ကို ညီအစ်မ မြို့တော် အဖြစ်သတ်မှတ်ရန် နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ‘‘ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အကြောင်းပြန်ချက်အရ ညီမမြို့တော် SisterCity လုပ်ဖို့ နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီလိုက်ပြီးလို့ သိရပါတယ်။ ညီမမြို့တော်ဖြစ်သွားပြီးဆိုတော့ ရှေ့လုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေက အစိုးရ အချင်းချင်း ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြမယ် ထင်ပါတယ်’’ဟု မြန်မာ
Posted: 06 Jun 2014 03:50 AM PDT
စိတ်မနှံ့သူလို့ ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀ိုင်းက သတ်မှတ်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးတဦးက ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် တဆူကို မဖွယ်မရာလုပ်မိလို့ ဘာသာရေးဆန်တဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမယ့် အခြေအနေတခုကို လားရှိုးမြို့က အာဏာပိုင်တွေ အချိန်မီ ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Policeရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ လားရှိုးမြို့၊ ရပ်ကွက် ၁၂ နယ်မြေ ၁၂ အတွင်းမှာ နေထိုင်တဲ့ စိတ်မနှံ့သူလို့ ပတ်ဝန်းကျင်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးတဦးက သူနေထိုင်တဲ့ရပ်ကွက်နဲ့
Posted: 06 Jun 2014 03:48 AM PDT
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်မှာ ဖြန့်ကြက်ထားတဲ့ မြန်မာတပ်တွေ ပြန်ရုပ်ဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်က တောင်းဆိုချက်ကို မြန်မာဘက်က ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့ အစည်းအဝေးမှာ ပယ်ချခဲ့တယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားစောင့်တပ်က ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဇစ် အာမက် (Aziz Ahmed) က The Age သတင်းစာကို ပြောဆိုပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြိ်ု့မှာ ကျင်းပတဲ့ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားစောင့်တပ်မှူး အစည်းအဝေးအပြီး ဘင်္ဂလားသတင်းစာ The New Age
Posted: 06 Jun 2014 03:34 AM PDT
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မကြာခင် ဖြန့်ချီတော့ မယ့်၊ အိုရီဒူး Ooredoo ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီ ရဲ့၊ မိုဘိုင်း တယ်လီဖုန်း ဆင်းမ်ကဒ်တွေ မသုံးစွဲရေး ကို၊ မျိုးချစ် သံဃာတော်တွေ နဲ့ မျိုးချစ်ပြည်သူများ အဖွဲ့ အမည်နဲ့ ဟောပြောမှု တွေ ပြုလုပ် လာနေပါတယ်။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီဟာ ကာတာနိုင်ငံ အခြေစိုက် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တို့ရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ အချက်အပေါ် အခြေခံပြီး၊ အခုလို Ooredoo ကုန်ပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ် နဲ့
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်ထဲက၊ တာမိုးညဲ ဒေသမှာ၊ တပ်မ၈၈ လက်အောက်ခံ အစိုးရတပ်နဲ့ တအာင်း အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် TNLA အကြား၊ ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့က တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ၊ အစိုးရတပ်ဘက်က တပ်ရင်းမှုး ဒုဗိုလ်မှုးကြီး ကျော်ထင်အောင်အပါအဝင် ၃ ဦး သေဆုံးသွားပါတယ်။ အစိုးရဘက်က ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ဦးရဲထွဋ်ကတော့၊ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲ မဟုတ်ပဲ၊ ယာဉ်တန်းနဲ့ သွားလာနေစဉ်၊ ခြုံခို တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာလို့
Posted: 05 Jun 2014 07:48 PM PDT
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန သည် တက္ကသိုလ်ဆရာ၊ ဆရာမ များ ရာထူးတိုး၊ ပြောင်းရွှေ့ရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျင့်သုံးသော မူဝါဒများကို ဆရာ၊ ဆရာမများ သို့ ပထမဆုံးအကြိမ် အသိပေး၍ သဘောထား ဆန္ဒတောင်းခံ လိုက် သည်။ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ ဒီ ဂရီကောလိပ်များရှိ ဆရာ၊ ဆရာမ များ၏ နေရာအပြောင်းအရွှေ့ နှင့် ရာထူးတိုးအတွက် အငြင်း ပွားမှုများဖြစ်ပေါ်နေပြီးနောက် ရာထူးတိုး ပြောင်းရွှေ့မှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများကို ဆရာ၊ ဆရာမများ အား
Posted: 05 Jun 2014 07:42 PM PDT
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၅ မြန်မာနိုင်ငံ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် နယ်စပ်တွင် နယ်ခြားမှတ်တိုင် သတ်မှတ်ရာ၌ ဒေသခံများအကြား အငြင်းပွားမှု ဖြစ်နေသော ပြဿနာကို တရုတ်အစိုးရနှင့် ပြေလည်စွာ ညှိနှိုင်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်က ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ နယ်ခြား မှတ်တိုင်များသည် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့နယ်နှင့် နမ့်ခမ်းမြို့နယ် အနီးတွင် နှ
Posted: 05 Jun 2014 07:41 PM PDT
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၅ တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အချို့အကြား တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေဆဲ ဖြစ်သော ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် တာမိုးညဲ မြို့နယ်ခွဲအတွင်း ရှေ့တန်းစစ်ကြောင်းမှ ပြန်လာသော မော်တော်ယာဉ် တစ်စီးကို KIA အဖွဲ့က ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သဖြင့် တပ်ရင်းမှူးတစ်ဦး ကျဆုံးခဲ့ကြောင်း အစိုးရနှင့် တပ်မတော် အသိုင်းအဝိုင်းထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။ တပ်ရင်းမှူး ကျော်ထင်အောင် (စုံစမ်းဆဲ) သည်